बलात्कारः अहमको उपजको पराकाष्टा
कान्तिपुरको कोेसेलीमा छापिएको मदनमणि दीक्षितको प्रकाशोन्मुख संस्करण सङ्ग्रह ‘मेरी माता’ बाट उद्धृत एक अंश बिहानै हेर्दै थिएं । मेरी एक जना बालसखीले फोन गरी । ‘मिश्रा, तिमीले टिकट काट्छौ होइन ? मलाई भोलिको लागि रेलको ३ वटा अर्जेन्ट टिकट कसरी हुन्छ मिलाउन है, राँचीको लागि ।’
मैले भनँे, ‘प्लेनको त काट्छु । ट्रेनको हेर्छु तर इसु गर्दिनँ, तत्कालको लागि त टिकट काउन्टर नै जानुपर्छ । उसले भनी, ‘टिकट काउन्टरसम्म जाने अवस्था र समय अहिले मसँग बिलकुल छैन साथी । तिमीलाई थाहै छ पवित्रा दिदीलाई एकछिन छोड्न मिल्दैन । अहिले झन् गम्भीर छ अवस्था ।’
मेरी साथीलाई पवित्राकै आमाबाबाले सानैदेखि हुर्काएका थिए । पवित्रा खासमा मेरी साथीको सानीमाकी छोरी हो । प्रेमविवाह भएको हो पवित्राको । प्रेमको मामलामा केटाहरू नपाउञ्जेल मरिहत्ते गर्छन् केटीहरू पाएपछि मरिहत्ते गर्छन् । त्यस्तै भयो पवित्राको जीवनमा पनि । मोरङका जीवन घिमिरेले मरिहत्ते गरेर घर भित्र्याए पवित्रालाई । श्रीमान्लाई अगाध प्रेम गर्थिन् उनी । विवाह भएको ३ वर्षसम्म पनि सन्तान नभएको बहानामा श्रीमान्ले घरमा सौता भिœयाए ।
समझदारीमा बस्न सकिन्छ भनेर पवित्रा १ वर्षसम्म त जसोतसो श्रीमान्कै घरमा बसिन् उनी । उनी निजी स्कुलमा पढाउँथिन् । घरमा सासूससुरालाई सघाउँथिन् । त्यसैगरी बित्दै थिए उनका दिनहरू । अन्ततः श्रीमान् र सौताको ज्यादती र तिरस्कार खप्न नसकेर उनी माइत आएर बस्न थालिन् । खाइरहेको जागिर पनि छुट्यो । अग्निलाई साक्षी राखी सात फेरा लगाएर बाँधेको बन्धन पनि टुट्यो । त्योभन्दा ठूलो श्रीमान्प्रति प्रेमले भरिएको पवित्राको मनको बा“ध फुट्यो ।
पवित्रा भित्रभित्रै कुँडिइन् । धैर्यको डोरी चुँडिन लाग्यो । जागिरको खोजीमा चारतिर उनी भौ“तारिइन् । वृद्ध आमाबामाथि पवित्राको बेरोजगारीले अरु आर्थिक भार थपिदियो । एकदिन आफ्नै काकाले चिनेको साथीको स्कुलमा कामको लागि बोलाएको छ भनेर पवित्रालाई लिएर गए । काकाको अविभावकत्वमा ढुक्क परेर पछि लागिन् पवित्रा । घर फर्किने क्रममा पवित्राको आर्थिक सामाजिक र पारिवारिक अवस्थाको कमजोरपनको फाइदा उठाउँदै रक्षक होइन भक्षक भएर उत्रिए आफ्नै काका ।
काकाको गिद्दे नजर पर्न गयो पवित्राको शरीरमा । अन्ततः केही छिनमा देखाइहाले असली रूप काकाले । घर फर्किने बाटोमा जङ्गल पथ्र्यो । जङ्गलको बीचमा पुगेपछि एउटा पुरुष अहम्ताले पवित्राको इज्जतमाथि धावा बोल्यो । भतिजीमाथि जबरजस्ती गरे काकाले । रगतको नाता भनेनन् । निरीह पवित्राको रक्षा गर्ने कोही भएनन् । यौन पिपासु काकाले निरीह पवित्राको शरीरमाथि हैकम चलाइरहे ।
प्रतिकारमा उत्रिँदा पाखुरामा गहिरो चोट लाग्यो पवित्राको । त्यो भन्दा गम्भीर चोट लाग्यो उनको महिला मानसपटलमा । पाखुरामा ९ टाँका लगाउनुप¥यो । अक्षम्य अपराधबोधको त्रासले भक्षक काका मुग्लान भासिए । परिवारभित्रैको घटना हो । उजुरबाजुरतिर नलाग्नु भन्दै परिवार छरछिमेक सबैले सम्झाए पवित्राका आमाबुबा र पवित्रालाई । गर्भवती भइन् उनी ।
हाडनाताभित्रै आफ्नै काकाले गरेको बलात्कारको पीडाले विक्षिप्त बनायो पवित्रालाई । अन्ततः मानसिक सन्तुलन नै गुमाइन् । गर्भपतन गराउन नमिल्ने बताए डाक्टरले । यता पवित्राको पेटमा दिनदिनै बच्चा हुर्किदै थियो उता पवित्राको मानसिक अवस्था झनझन् बिग्रँदै थियो । आमाको मानसिक अवस्था खराब हुँदा जन्मिएको बच्चाले आमाको मातृवात्सल्ययुक्त काखको न्यानो मायाबाट भने सधँैको निम्ति टाढा बस्नुप¥यो ।
शल्यक्रिया गरेर बच्चा निकालियो । पवित्राको होश आउनु अगावै सन्तानविहीन एक दम्पत्तिले पवित्राको बच्चा स्वीकार गर्ने भनी लिएर गए । घटनाको ९ वर्षपछि पनि उनको मानसिक सन्तुलन ठीक छैन । समाजको तिखो प्रश्नको सामना गर्नुप¥यो परिवारले । भएको एउटा खेत पनि बेचेर पवित्राको उपचार गराए तर उनको स्वास्थ्यमा सुधार हुन सकेन ।
आफ्नै काकाबाट भएको घोर कुकृत्यको घटनाले पवित्राको दिल दिमाग विषाक्त तुल्याइदियो । धरान घोपा क्याम्पदेखि विराटनगर, सिलिगुढी र कलकत्तासम्म लगेर उपचार गराउँदा पनि रोग २० को १९ भएको छैन ।
समस्याका पहाड ज्यूँका त्यूँ छन् । अन्त्यमा केही नलागेपछि राँची लाने निर्णय गरिएको रहेछ । मैले काकडभिट्टाको एक जना साथीलाई टिकट काट्ने जिम्मा दिएँ । दिउँसो कृतज्ञता टक्र्याउँदै टिकट पाएको जानकारी दिइन् साथीले । भोलिपल्ट बिहान साथीको फोन सम्पर्क भएन । शायद उनीहरू राँचीको लागि प्रस्थान गरिसके होला । थाहा छैन राँचीले पवित्राको दिमागी हालत सकुशल अवस्थामा फर्काउँछ फर्काउँदैन । यो सब उही बलात्कारको कारणले भएको थियो । वेद पुराणका अनुसार ८४ लाख जुनी पार गरेर पवित्राले पाएको मनुष्य चोला आफन्तको केही समयको उन्मादले ध्वस्त बनाइदियो ।
बलात्कार के हो ? किन र कसरी हुन्छ ? भन्ने विषयमा व्यापक वहस , तर्क, विर्तक, र छलफल भएको पाइन्छ । सामान्य रूपमा लिँदा बलत्कार एक पक्षको बिमतिमा हुने शारीरिक सम्बन्ध हो । एउटाको अस्वीकृतिको बाबजुद पनि अर्काले जबरजस्ती गर्छ । वास्तवमा यो अपराध नै हो र अपराध ठहर्छ । सम्भवतः दुवै पक्षको जीवनमा कालो धब्बा छोड्ने बलात्कारले विशेष गरी महिलाको जीवनमा कारुणिक अवस्थाको सिर्जना मात्र गर्दैन अकल्पनीय कठिन भविष्यको समेत निर्माण गरिदिन्छ । कतिलाई त वीभत्स मृत्युवरण समेत गराइदिन्छ । यस्ता प्रशस्त उदाहरणहरू छन् ।
निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको वीभत्स हत्या प्रकरण एउटा उदाहरण हो । यो घटनापछि पनि अन्य धेरै किशोरी, महिला वृद्धादेखि २ वर्षका बालिका समेत यस्तो कुकृत्यको शिकार भएको विषय मिडियामा प्रशस्तै आइरहेको छ । समान उमेर र सहमतिमा गरिने शारीरिक सम्पर्क मानवीय आवश्यकता हो ।
सृष्टि सञ्चालनको लागि पुरुष र महिलालाई फरकफरक जैविक गुण दिएको छ प्रकृतिले । त्यसमा महिलालाई अरु विशिष्टता प्रदान गरेको छ पाठेघर, योनी र स्तन बनाइदिएर । भ्रुण हुर्काउन पाठेघर, बच्चा जन्माउन योनी र दूध चुसाउन स्तनको निर्माण गरिदिएको छ प्रकृतिले नै ।
तर महिलाको यही विशिष्ट गुणको योगदानले आफू यो धर्तीमा पदार्पण भएको कुरा बिर्सेर, आफू त्यही स्तन चुसेर हुर्किएको कुरा चटक्कै भुलेर महिलाका तिनै अङ्गहरूलाई लाञ्छना लगाउँदै पुरुषहरू उन्मादकोे क्षणिक आवेग नियन्त्रण गर्न नसकी जबरजस्ती साङ्घातिक हमला गर्छन् । महिलाका अङ्गहरूमाथि कठोर प्रहार गर्छन् । रगतपच्छे बनाउँछन् अनि मृत्युको मुखमा पु¥याउँछन् ।
सृष्टि सञ्चालनका लागि विकल्परहित महिलाका जैविक विशेषताहरूमाथि सदियौँदेखि पुरुषकै दाबी हँुदै आएको छ । जित्नेहरूकै घोडा बनेका इतिहासका किनारहरूमा विलुप्त अवस्था रहेको पाइन्छ । र त महिलावादी लेखक केट मिलेट भन्छन्, ‘पुरुषसत्ताको एकाधिकार यौनमा आधारित छ । धर्मशास्त्रका ग्रन्थहरूमा पनि सुषुप्त अवस्थामा उल्लेखित छन् । रामायण र महाभारतका विभिन्न अध्यायहरूमा पनि सुस्त वर्णित छ यो पुरुष अहमताको सिलसिला । यो पितृसत्ताको अदृश्य अहमता कलुषित मानसिकताको परिणति हो ।
अलिखित नै सही लामो इतिहास बोकेर आएको यौन शोषण, बलात्कार र यौन दासत्वको वर्णन गरिएका ग्रन्थहरूले महिला केवल पुरुषको उपयोेगको लागि बनाइएको भान हुन्छ । त्यसैले त उदारवादी लेखिका सिमोन द बोउवा आफ्नो पुस्तक ‘७ सेकेन्ड सेक्स’ मार्फत् भन्छिन् ‘महिला जन्मिँदैनन् बनाइन्छन् ।’ जुगौँदेखि दबिँदै र थिचिँदै आएका स्त्रीहरूले आफ्नै शरीर र प्राण माथिको प्रहारको दोष आफैँ खेप्न बाध्य छन् । त्यसैको लागि बनाइएको छ महिला ।
सडकदेखि सदनसम्म, मझेरीदेखि आँगनसम्म हडपेको पुरुष प्रधानताले यौन हिंसा र बलात्कार हुनुको श्रेय महिलाका हाउभाउ व्यवहार र पहिरनलाई बनाइरहेका छन् । सामाजिक सञ्जाललाई दोष दिइरहेका छन् । जुन बेला आम सञ्चारको युग थिएन न थियो सामाजिक सञ्जाल नै । रेडियोसम्म सुन्न नपाएका हाम्रा हजुरआमाको पालाभन्दा सदियौं अघिदेखि नै हुने गथ्र्याे यौन हिंसा र बलत्कारका घटना । नेपालमा राणा शासनभन्दा अघिदेखि नै यौनदासीहरूमाथि यौन ज्यादती गर्ने गरेको विषयको साक्षी छ नेपालको इतिहास । त्यस्तै ९ महिने बालिकालाई पहिरनको के ज्ञान हुन्छ ? ८० वर्षीया वृद्धाले पुरुषलाई उत्तेजित पार्ने कुन र कस्तो पहिरन लगाएर अङ्ग प्रदर्शन गरेकी हुन्छिन् । कस्तो हाउभाउ देखाउँदा बलात्कारको दोषी ठहरिन्छ महिलाको व्यवहार र पहिरन ?
सामाजिक अपराध अनुसन्धान विभागको तथ्याङ्कअनुसार विगतको तुलनामा १० प्रतिशतले बढेका छन् बलात्कारको विरुद्धका उजुरीका सङ्ख्या । यथार्थमा यसको दुई गुणा बढी घटनाहरू भित्रभित्रै दबाइन्छ । लोक लाज र बदनामीको डरले अनेक प्रलोभन र डर त्रास र धम्कीका कारण मिलेमतोमा लुकाइन्छ र अपराधीलाई यसले उन्मुक्ति र उत्साह मिल्छ । मूकदर्शक बन्दछ आम नागरिक । यसमा समाज कति दोषी छ भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
यदि साहस गरेर उजुरी गरिहाले पनि पीडित महिला वा किशोरीले न्याय पाउने नाममा प्रहरी चौकीमा बयान दिँदा र अदालतले बयान लिँदा बारबार नाङ्गिनु पर्छ । पुलिसचौकीदेखि अदालत वा इजलासमा बिसौं पटक प्रश्न सोधेर कपडा लगाए पनि वस्त्रहीन बनाइन्छ नारीलाई । प्रश्नहरूका तिखा प्रहारले महिलाको अङ्गप्रत्यङ्ग छामिन्छ, नापजोख गरिन्छ ।
यो सब पुरुषप्रधान समाजमा महिलाले पाएको ओहदाको परिसूचक हो । यस्ता घटनालाई समाज र कानुनको अगाडी ल्याएर अपराधीलाई सजाय दिलाउने महिला अधिकारकर्मी र सामाजिक अभियन्ताहरूको अधिकांश प्रयासहरू घाम झुल्केपछि बिलाएको शीतजस्तै बिलाएर जान्छ ।
अबला नारी नदेख्ने, रगतको नातालाई नछोड्ने, ९ महिने शिशुदेखि ८० वर्षीया वृद्धासम्म नभन्ने, अनि भोगेको शरीरलाई क्षतविक्षत बनाउन पछि नपर्ने पुरुषको अपराध घट्नुको साटो बढिरहेको पाइन्छ । हाम्रो समाजमा विद्यमान भेदभावले छोरालाई केराउजस्तो फुलिन दिने अनि छोरीले मरिचजस्तो चाउरिएरै बस्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । जबसम्म यो पर्खाल भत्किँदैन तबसम्म रोकिँदैनन् बलात्कारका शृङ्खलाहरू ।
पवित्रा एउटा प्रतिनिधि पात्र हो पवित्रा जस्ता हजारौँ महिला तथा किशोरीहरू छन् हाम्रो समाजमा । यसरी पवित्रा, निर्मला, मैना, सुन्तलीजस्ता हजाराँै नारीहरूको जीवन बर्बाद पार्ने अनि त्यत्तिले चित्त नबुझे जीवनलीला नै समाप्त पारिदिने बलात्कार अपराधको परकाष्टा नभएर के हो त ? यस विषयमा आम नागरिकले सोच्नुपर्नेछ । नत्र हरेक पुरुषको अनुहारमा बलात्कारीको छाया देखेर महिलाले सन्त्रासमा बाँच्नु नपर्ला भन्न सकिन्नँ ।